के तपाई जाडोमा कपाल झर्ने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् डा. धर्मेन्द्र कर्णको सुझाव - Himali Patrika
के तपाई जाडोमा कपाल झर्ने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् डा. धर्मेन्द्र कर्णको सुझाव
हिमाली पत्रिका २५ पुष २०७६, 11:51 am
पाल झर्ने समस्या हरेकले भोगेको समस्या हो । कसैको सामान्य अवस्थामा कपाल झर्छ भने कतिको अस्वाभाविक रूपमा । कपाल झर्नुको पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन् । बेलैमा कारण पत्ता लगाएर सावधानी अपनाउने हो भने यो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । कपाल झर्ने समस्या र यसका समाधानबारे क्युटिज केयर वानेश्वरका वरिष्ठ छाला तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ प्रो.डा. धर्मेन्द्र कर्णको सुझाव यस्तो छ ।
(यो लेख टुना भट्टले रातोपाटीको लागि लेख्नु भएको हो। तस्विर : कृष्ण खड्का रातोपाटीडटकम)